रोचक खबर – Page6– rastriyakhabar.com
मिसेस युनिभर्स २०१९ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै बिनु लामिछाने
मिसेस युनिभर्स २०१९ मा नर्स बिनु लामिछानेले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दे प्रतिष्पर्धामा गर्ने भएकी छिन्। २२ देखि २९ डिसेम्बरसम्म चीनमा हुने मिसेस युनिभर्समा उनले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकी हुन्। प्रतियोगितामा ९० जना राष्ट्रका विवाहित सुन्दरीहरु भिड्दैछन्। २८ वर्षीया बिनुको स्थायी घर..
बबिताले जन्माइन् दुई टाउको र तीन हात भएको अनौठो बच्चा !
एजेन्सी । संसारमा कहिले काहीँ अनौठा र रोचक घटना घट्छन् । मान्छेलाई पत्याउनै मुस्किल हुन्छ । एउटा यस्तै घटना हालै भारतमा घेटेको हो । जहाँ एक महिलाले अनौठो बच्चालाई जन्म दिएकी छिन् । भारतको मध्ये प्रदेशको विदिशा लिल्लाको घटना हो । ती महिलाले दुई टाउको, तीन हात र चार पञ्जा भएको बच्चाको जन्म दिएकी हुन् ।..
बुधबार, कार्तिक २७, २०७६ मा प्रकाशित
केही तथ्य र रोचक कुराहरु शास्त्रमा उल्लेख गरिएका पाइन्छन् । शास्त्रले बताए अनुसार महिलामा केही त्यस्ता संकेत वा चिन्हहरु भएमा उनीहरु पुरुषका लागि भाग्यमानी सावित हुन्छन् । यस्ता युवतीसँगको विवाह वा संगतले नै तपाईको भाग्य चम्किेने विश्वास गरिन्छ । त्यस्ता कन्या विवाहपछि घर भित्रिँदा हरेक..
व्यापार, व्यवसाय र जागिरको कमाइबारे त हामी सबैले सुने–जानेकै हो तर, नितम्बै कमाई त्यो पनि पत्याई नसक्नु ! पत्यार नलागे पनि कुरा सत्य हो । नि’तम्बकै कारण यति धेरै कमाइ गर्ने युवती रोमानियाकी एन्ड्रिया एबेली इन्स्टाग्राम स्टार हुन् । राजधानी बुखारेस्टनिवासी ३५ वर्षीया यी प्रभावशाली इन्स्टाग्राम..
एजेन्सी । संसार धेरै रहस्यमयी चिजहरु छन् । केही पत्ता लागेका छन् केही बाँकी । सुन्दा र देख्दा नै अचम्म लाग्ने घटनाले मानिसहरुलाई चकित तुल्याउँछ । यस्तै एउटा अचम्को झरना छ जहाँ आगो निरन्तर बलिरहन्छ । एउटा रहस्यमय ढुङ्गाको माथिबाट लगातार झरना बगिरहन्छ तैपनि झरनाको ठिक तल कयौँ वर्षदेखि आगो बलिरहेको छ..
मानिसको टाउकोमा सिंग पलाएपछि…
शुक्रबार, अशोज १७, २०७६ मा प्रकाशित
मानिसको सिंग हुँदैन, यो सबैलाई थाहा भएको विषय हो । यो प्राकृतिक कुरा पनि हो । सिंग केही जिवजन्तुहरुको मात्र हुन्छ । सिंगले जनावरलाई बाहिरी आक्रमणको प्रतिकार गर्न मद्दत गर्दछ । तर के तपाईले कुनै मानिसको सिंग देख्नुभएको छ रु पक्कै छैन होला । किनकी मानिसको सिंग हुँदैन । साना नानीहरु तथा केही जात्रा,..
मानिस बायाँ हाते हुनुको रहस्य माथि अनुसन्धान गर्दै वैज्ञानिकहरू
वैज्ञानिकहरूले कुनै मानिस बायाँ हाते हुनुमा डीएनएमा हुने आनुवंशिक संरचनाको भूमिका भएको प्रमाण पहिलो चोटि फेला पारेका छन्। मस्तिष्कको संरचना एवम् त्यसको काम गर्ने प्रणाली त्यसमा पनि विशेषतः भाषिक सीपमा त्यो आनुवंशिक निर्देशक प्रणालीको प्रभावशाली संलग्नता देखिन्छ। अक्सफर्ड विश्वविद्यालयक..
१. एक स्वस्थ मानिस प्रतिमिनेट औषत १७ पटक आँखा झिम्काउँछ । यो गणनाको आधारमा १ दिनमा करीब १६ हजार पटक आँखा झिम्किन्छ र बर्षमा ६० लाख पटक । २. आँखा करीब २० लाख भागहरु मिलेर बनेको हुन्छ । ३. आँखाको कोर्निया शरीरको एक मात्र त्यस्तो तन्तु हो जसमा रगत प्रवाह हुँदैन । ४. एउटा आँखाको तौल करीव २८ ग्राम हुन्छ । ५...
ओठबारे तपाईंलाई नै रोचक लाग्ने यि हुन् १५ तथ्य
मानव शरीरका अंगमध्ये ओठ सबैभन्दा संवेदनशील हुन्छ । सौन्दर्यमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने ओठ व्यक्तिअनुसार विभिन्न आकारका हुन्छन् । तर, ओठबारे कैयौँ तथ्य छन्, जुन तपाईं अधिकांशलाई थाहा नहुन सक्छ : -ओठमा कहिल्यै पसिना आउँदैन, किनभने पसिना ग्रन्थि नै हुँदैन । ओठमा डन्डिफोर पनि आउँदैन। -औँलाको छापजस्तै..
पोर्न फिल्मबाट मिया खलिफाले कमाइन् यति रकम ! फ्यानलाई पत्याउन गाह्रो
पोर्न उद्योगमा मिया खलिफा चर्चित छिन् । यस्तो पनि भन्ने गरिन्छ कि, मियाले यही उद्योगबाट नै राम्रो कमाइ गरेकी छिन् । तर मियाले भने आफूले यो उद्योगबाट अहिलेसम्म साढे ८ लाख कमाएको बताउँछिन् । यो कुरालाई फ्यानले भने पत्याएका छैनन् । जबकि, एक जमानामा सबैभन्दा चर्चामा आउने एडल्ट स्टारका रुपमा मिया नै..
हस्पिटलबाट निकालेर घाटमा लागि शव जलाउन खोज्दा, शव चिच्याएर कराउन थालेपछि ……
ज्यान गएको भन्दै घाट पु¥याइएको व्यक्ति ज्यूदै फर्किए भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ तर अचम्म मान्नु पर्दैन जिल्लाको रैनादेवी गाउँपालिका १ सिद्देश्वरमा घाटमा लगिएकी एक महिला ज्यूदै फर्किएकी छन् । केही समय अघि झाडापखला लागेर युनाइटेड मिसन अस्पताल भर्ना भएकी सिद्देश्वरकी ३६ वर्षीया नर्मता ज्ञवाली..
काठमाडौं । शास्त्र र आयुर्वेदमा दिनको समय काम गर्नका लागि अनि राति चाहिँ सुत्नका लागि निर्धारण गरेका छन् । तर रातमा ड्युटी हुने मानिस त बाध्यतावश राति उठ्ने र दिउँसो सुत्ने गर्छन् । कोहीकोहीको चाहिँ दिउँसो सुत्ने बानी परेको हुन्छ । तर शास्त्र र आयुर्वेदमा दिनमा सुत्न अनुचित मानिएको छ । दिउँसो..